ESI LELEE OZI NBANYE NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Esi lelee ozi nbanye na Windows 10
N'ọnọdụ ụfọdụ, karịsịa maka njikwa ebumnuche ndị nne na nna, ọ nwere ike ịdị gị mkpa ịmara onye tinyere kọmputa ma ọ bụ abanye na mgbe. Site na ndabara, oge ọ bụla onye ọ bụla na-agbanye kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ na ndekọ na Windows, ndekọ na-egosi na log ndekọ.
Ị nwere ike ịlele ozi a na njirimara Viewer, ma ọ dị ụzọ dị mfe - na-egosipụta data banyere logins nke mbụ na Windows 10 na ntinye nbanye, nke a ga-egosipụta na ntụziaka a (rụọ ọrụ naanị maka akaụntụ mpaghara). Nakwa na isiokwu yiri nke ahụ nwere ike ịba uru: Otu esi ejedebe ọnụ ọgụgụ nke mgbalị iji tinye paswọọdụ Windows 10, Control Parental Control Windows 10.
Chọpụta onye na mgbe agbanyere kọmputa ma banye na Windows 10 site na iji nchịkọta ndekọ
Ụzọ mbụ eji eji edekọ editọ Windows 10. M na-atụ aro na ị ga-ebu ụzọ mee ka usoro nkwụghachi usoro, nke nwere ike ịba uru.
Pịa igodo Win + R na keyboard (Win bụ isi na Windows logo) ma pịnye regedit na windo ọsọ, pịa Tinye.
Na nchịkọta akụkọ, gaa na mpaghara (nchekwa dị n'aka ekpe) HKEY_LOCAL_MACHINE Software Microsoft Windows CurrentVersion Policies System
Right-click na oghere efu na akụkụ aka nri nke nchịkọta akụkọ ma họrọ "New" - "DWORD parameter 32 bits" (ọbụlagodi na ị nwere usoro 64-bit).
Tinye aha gị DisplayLastLogonInfo maka nke a.
Pịa okpukpu abụọ na nkeji ohuru ohuru wee setịpụ 1 na ya.
Mgbe emechachara, mechie edetu ndekọ ma malitegharịa kọmputa ahụ. Oge ọzọ ị abanye, ị ga-ahụ ozi gbasara ọganihu gara aga nke gara aga na Windows 10 na mgbalị nbanye na-enweghị isi, ma ọ bụrụ na ndị dị otú a, dịka na nseta ihuenyo n'okpuru.
Gosipụta ozi gbasara nbanye gara aga na-eji onye nchịkọta iwu obodo
Ọ bụrụ na ị nwere Windows 10 Pro ma ọ bụ Enterprise arụnyere, ị nwere ike ime nke a n'elu site n'enyemaka nke nchịkọta isiokwu nke obodo ahụ:
Pịa igodo Win + R wee banye gpedit.msc
Na nchịkọta isiokwu nke obodo nke na-emepe, gaa Nhazi Kọmputa - Ntọala nchịkwa - Njirimara Windows - Nhọrọ Nbanye Windows.
Pịa ugboro abụọ na ihe "Ngosipụta mgbe onye ọrụ na-edekọ ihe ọmụma gbasara mgbalị nbanye mbụ", tinye ya na "Kwadoro", pịa OK ma mechie onye nchịkọta iwu obodo ahụ.
Emeela, ugbu a na ntinye nke ọzọ na Windows 10 ị ga-ahụ ụbọchị na oge nke ọganihu na-enweghị ọganihu nke onye ọrụ a (ọrụ ahụ na-akwado maka ngalaba) na usoro. I nwekwara ike inwe mmasị na: Otu esi ejedebe oge eji eji Windows 10 maka onye ọrụ mpaghara.